ဒူဒူကြီး: Propeller Efficiency Mathematical Analysis
Controllable pitch propellers, Azimuth propellers, Vertical axis propellers, Paddle wheels နဲ့ Shrouded propellers တွေရယ်လို့အမျိုးအစားတွေ ကွဲပြားပေမယ့်၊ Mathematical Analysis မှာတော့ အားလုံးဟာအတူတူပဲရယ်လို့၊ သတ်မှတ်ထားတာကိုတွေ့ရသလို၊ Propellers တွေရဲ့ Efficiency နဲ့ပက် သက်သမျှ မှတ်သားမိသလောက်ကိုဖော်ပြပါဦးမယ်။
Propeller ကို Actuator Disc တစ်ခုအဖြစ်စဉ်းစားပြီး၊ Disc လည်ပတ်မှုကြောင့်၊ ရေကို Axial Acceleration ဖြစ်ပေါါစေတယ်လို့ယူဆပါတယ်။
A = Area of actuator disc
Po = Ambient pressure ( Pressure of water initially and finally )
dp = Increase in pressure at the tip of the disc
va = Speed of advance of the screw
ava = Initial velocity of water နဲ့
bva = Final velocity of water...ရယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။
Disc နဲ့ ယက်ထုတ်လိုက်တဲ့၊ ရေ ရဲ့ အလျှင် Velocity of Water ဆက်သွယ်ချက်အနေနဲ့
အဖြစ်တွက်ထုတ်ယူကာ၊ "a" ကို Axial inflow factor အဖြစ်ယူဆပါတယ်။ Propeller တပါတ်၊ တနည်း အားဖြင့် Disc တပါတ်လည်တိုင်း သက်ရောက်မှုကြောင့်၊ ပေါါပေါက်လာမယ့်၊ ရေထုထည်ပမာဏ Mass of water ကို M လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ
M= (Density X Volume of water)/ Time = ρ X Area X (Length/ Time) = ρ X Area X Velocity နဲ့
Density = ( Mass/ Volume) = ρ A va (1+a) ရယ်လို့တွက်ထုတ်ယူနိုင်ပြီး၊
M = ρ A va (1+a)
အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။ နယူတန်ရဲ့ တတိယနိယာမအရ၊ Propeller မှ၊ ရေကို ယက်ထုတ်လိုက်တဲ့ အတွက်၊ Thrust Force Acting ဖြစ်ပေါါလာကာ သဘေ်ာဟာရွှေ့လျားပါတယ်။ အဲဒီအခါ၊ အဟုန်ဆိုတဲ့ Momentum ဖြစ်ပေါါလာပြီး၊ " Momentum = Mass X Velocity" ဖြစ်တဲ့အတွက်၊
Momentum = Mass X Velocity = ρ A va (1+a) X bva
အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ Momentum ကို၊ Thrust အနေနဲ့ ပြောင်းလဲတဲ့အခါ၊
Thrust ( T ) = ρ A va2 ( 1 +a) b
ကိုရရှိလာပါတယ်။ Thrust ကြောင့်သဘေ်ာဟာရွေ့လျားခဲ့ရပြီး၊ သဘေ်ာကိုအလျှင်နဲရွေ့လျားစေခြင်းဟာ Work done ဖြစ်တာမို့၊ Work Done ကိုစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါ၊
Work Done = Thrust X Velocity
Work Done = T X ava
Work Done = ρ A va2 ( 1 +a)b X ava
Work Done = ρ A va3( 1 +a) X ab တနည်းအားဖြင့်
Work Done = ρ A va3( 1 +a) X ab
ဖြစ်ပါတယ်။ Water column မှာဖြစ်ပေါါလာမယ့် Kinetic Energy ကို
Kinetic Energy (K.E) = ρ A va3( 1 +a) X ab = ρ A va3( 1 +a) b2 /2ရယ်လို့ယူဆနိုင်ပြီး၊ Work Done = Kinetic Energy ဖြစ်တဲ့အတွက်
Work Done = ρ A va3( 1 +a) X ab = ρ A va3( 1 +a) b2 / 2
ရယ်လို့ဖြစ်ပေါါလာပါတယ်။ "a = b/2" လို့သတ်မှတ်ကာ၊ Disc ရဲ့ ဧရိယာတဝက်ကိုသာ ရေဟာထိတွေ့ပြီး၊ အလျှင်ကိုဖြစ်ပေါါစေတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဒါကြောင့် Useful Work Done အနေနဲ့
Useful Work Done = ρ A va2 ( 1 +a)bX va = ρ A va3 ( 1 +a)b
လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ "Total Work Done" ဟာအထက်ဖော်ပြပါ၊ Work Done (၂) ခု ပေါင်းလဒ်ဖြစ်ပြီး
Total Work Done = ρ A va3 ( 1 +a)b + ρ A va3( 1 +a) X ab = ρ A va3 (1+a) [ ab +b]
တနည်းအားဖြင့် "Useful Work Done" ဟာ Input ဖြစ်ပြီး၊ "Total Work Done" ဟာ Output ဖြစ်ပါတယ်။ Efficiency ဟာ Input နဲ့ Output ရဲ့ အချိုးဖြစ်တာမို့
Efficiency (η) = (ρ A va3 ( 1 +a)b) /( ρ A va3 (1+a) [ ab +b] ) = 1/ (1+a)
ရယ်လို့တွက်ယူနိုင်ပါတယ်။ Efficiency ( η ) ဟာ၊ Ideal Efficiency ဖြစ်ပြီး၊ "a" ဆိုတဲ့၊ Axial inflow factor သေးငယ်လေလေ၊ Efficiency ကြီးမားလေလေရယ်လို့သိနိုင်ပြီး၊ သဘေ်ာရဲ့ Speed နဲ့ Thrust ပမာဏများများရစေဖို့ Disc သို့မဟုတ် Propeller မှယက်ထုတ်လိုက်တဲ့ ရေရဲ့အလျှင် Velocity ပမာဏ များဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
တကယ်တော့အပေါါမှာရေးသားဖော်ပြခဲ့တာတွေဟာ Axial Velocity အနေနဲ့သာ၊ အခြေခံ စည်းစားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး၊ Propeller ဟာလည်ပတ်ရင်းရွေ့လျားတာမို့၊ ( a' ) ဆိုတဲ့ Rotational inflow factor ကိုထည့်သွင်း စဉ်းစားဖို့လိုလာပါတယ်။ အဲဒီအခါ လည်ပတ်မှုကြောင့် ပေါါပေါက်လာမယ့် Rotational Velocity အဖြစ် စဉ်းစားကြည့်ခြင်းမှ Overall Efficiency ( η) ရယ်လို့ဖြစ်ပေါါလာရပါတယ်။
Overall Efficiency ( η) = ( 1 - a' )/ ( 1 + a)
a' = Rotational inflow factor
အထက်မှာရေးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့ Mathematical Analysis မှာ၊ Propeller ကို Actuator Disc တစ်ခုအဖြစ် သာ စဉ်းစားပြီး၊ လည်ပတ်ယက်ထုတ်လိုက်ခြင်းကြောင့် Propeller Blade တွေကြားမှာ ဖြစ်ပေါါ မယ့် Hydraulic Losses တွေကိုလစ်လျူရှုထားပါတယ်။
လက်တွေ့မှာ Propeller လည်ပတ်တဲ့အခါ၊ Blade တိုင်းဟာ Thrust ကိုဖြစ်ပေါါစေသလို Angular Acceleration နဲ့ Perpendicular Distance တွေကြောင့် Torque ကိုလည်းဖြစ်ပေါါစေတဲအကြောင်းနဲ့ Propeller Design တွေကိုရေးဆွဲတဲ့အခါ၊ Hydro-dynamics သို့မဟုတ် Fluids Dynamics ဘာသာရပ်မှ
F x = (F g) + (F p) + (F v) + (F t) ဆိုတဲ့၊ Reynolds’s Equation of Motion,
F x = (F g) + (F p) + (F v) ဆိုတဲ့ Navier- Strokes Equation၊
(∂p/p) + (g × dz) + (V × dv ) =0ဆိုတဲ့၊ Euler Equation of Motion နဲ့
Eulers Degrees of Vortex ဆိုတဲ့၊ Theory အစရှိတာတွေကိုကျယ်ပြန့်စွာကိုးကားရပါတယ်။
cavitation နဲ့ wake ကဲ့သို့၊ hydrodynamic ဆိုင်ရာအတားအဆီးတွေဟာ၊ boss diameter ratio ကြီးတဲ့ screw propeller တွေရဲ့၊ efficiency ကိုကျဆင်းစေပါတယ်။ CPP System ဟာ၊ သဘေ်ာရဲ့ maneuverability ကိုပိုကောင်းမွန်စေပေမယ့်၊ Overall Efficiency ( η) ဟာ၊ FPP System နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်၊ နည်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
CPP ရဲ့ boss diameter ratio (DB/D) ဟာ၊ 0.24 ~ 0.32D ခန့်ရှိပြီး၊ FPP ရဲ့ boss diameter ratio (DB/D) ကတော့၊ 0.16 ~ 0.25 ခန့်ရှိပါတယ်။ boss diameter ratio (DB/D) နည်းခြင်းကြောင့်၊ Overall Efficiency ( η) နည်းရပါတယ်။
pitch ဆိုတာကတော့၊ X - axis ဝင်ရိုးပေါါမှာ propeller တပါတ်လည်တိုင်းရောက်ရှိမယ့် distance အကွာ အဝေးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ
Propeller speed (V) = pitch x revolution
Fig. Propeller Slip
ဒါပေမယ့် သဘေ်ာ propeller ဟာ၊ ရေထဲမှာလည်ပတ်တာဖြစ်လို့၊ ရေရဲ့ တွန်း အားကြောင့် slip ဖြစ်ပေါါ လာပြီး၊ အဲဒီ slip ဟာ propeller ရဲ့ speed ကိုကျဆင်းစေပါတယ်။
propeller pitch-diameter ratio (P/D) ကို Bp - diagram မှရယူနိုင်ပါတယ်။ Bp နဲ့ ကို တွက်ထုတ် ယူတဲ့ အခါ၊
N = the revolution of the engine at an optimum condition favorable for the propeller operation
PD = the engine delivered horse power
VA = speed of advance
D = diameter of the propeller စတဲ့၊
prime mover မှအချက်အလက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါတယ်။ Bp နဲ့ ကိုတွက်ယူပြီးတဲ့အခါ၊ Bp - diagram မှ open water efficiency တန်ဘိုးနဲ့၊ pitch diameter ratio (P/D) တန်ဘိုးတို့ကိုရွေးချယ် ရယူနိုင်ပါတယ်။
Fig. Bp - diagram
pitch diameter ratio P/D တန်ဘိုးကိုမှန်ကန်စွာရွေးချယ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ အကယ်၍ မှားယွင်းရွေးချယ် မိရင်၊ engine ရဲ့ out put power နဲ့ speed ခြင်းတူပေမယ့်၊ propeller diameter နဲ့ pitch တန်ဘိုးပိုကြီး တဲ့သဘေ်ာမှာ၊ engine over load ဖြစ်ပေါါမှာဖြစ်ပါတယ်။
Propeller blade အဖြစ်အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့၊ material အမျိုးအစားတွေကတော့၊ Cast steel, Special propeller bronze, Ni - Al - bronze, Nodular cast iron, Special cast iron, Ordinary cast iron နဲ့ Gun metal တို့ဖြစ်ပါတယ်။ Propeller blade ရဲ့ Thickness ကိုတွက်ယူတဲ့အခါ၊ Taylor's method ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။ strength calculation ကိုလည်းထည့်သွင်းတွက်ချက်ရသလို၊
Minimum thickness of the blade = Radius 0.2 R of the ship's propeller
ဆိုတဲ့ပုံသေနည်းကို၊ အခြေခံပါတယ်။ Taylor's method အရ၊ Propeller Strength Calculation တွက်ချက် နိုင်သလို၊ Classification Societies တွေကလည်း၊ propeller အတွက်အသုံးပြုမယ့် material properties တွေနဲ့၊ ပက်သက်ပြီး၊ သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။
- Propeller Material (Special cast iron) = Minimum ultimate tensile stress 55 kg/mm2 = Minimum Elongation0%
ဒါ့အပြင် အသုံးပြုမယ့် prime mover ဟာ၊ reciprocating engine, turbine နဲ့ diesel electric အမျိုးအစား အစရှိတဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့၊ တတ်ဆင်မယ့် propeller ဟာ single screw သို့မဟုတ် twin screw ဖြစ်ခဲ့ရင်၊ propeller blade material ရဲ့ density နဲ့ design stress တို့ဟာ၊ ကွာခြားမှုရှိတာကိုတွေ့ရ ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ၊ John Charlton ရေးသားထားတဲ့၊ Marine Propellers and Propulsion, 2nd ed. (2006) စာအုပ်ကို ရယူနိုင်ပါတယ်။
Reference : Marine Propellers and Propulsion written by John Charlton, 2nd ed. (2006), Introduction to Naval Architecture written by Tupper, E.C, 4th ed. (2004),
Posted by ဒူဒူကြီး at 04:10